Kepa Oo Tababare Sarri Ka Raaligeliyay Markii Uu Diiday Inuu Garoonka Ka Baxo – Garsoore Sports
Kepa Oo Tababare…
Ciyaaryahanka reer Spain ayaa diiday inuu ka baxo garoonka Wembley kahor guuldaradii fiinaalka Carabao Cup sannadkii 2019, iyadoo tababarihiisa uu ka tagay garoonka isagoo careysan habeenkaa.
Kepa Arrizabalaga ayaa mar kale ku celiyey inuu ka qoomameynayo “is faham la’aan weyn” intii lagu guda jiray finalka Carabao Cup ee 2019, isagoo raaligelin kale siiyay tababarihii xilligaas ee Maurizio Sarri qeybtii uu ka qaatay guuldaradii Chelsea kasoo gaartay Manchester City.
Goolhayaha ayaa si xun u diiday inuu garoonka uga baxo kaddib markii lagu calaamadeeyay inuu beddel kusoo galo waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray goolhaye Willy Caballero, kahor inta aanan rigoorayaal lagu wajihin kooxda Pep Guardiola kulankii Wembley ka qabsoomay.
Dhacdadan ayaa dhalisay dood ballaaran oo adduunka oo dhan ah, laakiin hadda, laba sano kaddib,goolhayaha Isbaanishka wuxuu isku dayay inuu sii caddeeyo dhacdooyinka maalintaas soo shaac baxay isagoo raaligelin kale siinaya tababarihiisii xiligaas ee Maurizio Sarri.
Kepa ayaa ku qoray Player’s Tribune: “Waxaas oo dhami waxay ahaayeen ismaandhaaf weyn. Kddib samatabbixin, Lugta ayaan xanuun ka dareemay waxaana ugu yeeray jimicsiga si aan u hubiyo inaysan waxba aheyn. Iskusoo wada duuboo, in kastoo, waxaan rabay inaan hubiyo inaan koox ahaan neefta ceshan karno.”
“Si lama filaan ah, waxaan arkay in tababaraha, Maurizio Sarri, uu u diray Willy Caballero inuu is kululeeyo. Wuxuu u maleynayay inaan sii wadi karin. Ujeedkeyga, sax ama qalad, kaliya waxay aheyd inaan waqti ku lumiyo si aan u caawiyo kooxda. Ma aanan sameyn ‘ Ma qabo wax dhibaato ah oo daran oo iga celin lahayd inaan sii ciyaaro.”
“Waxaan isku dayay inaan tilmaamo inaan fiicanahay, iyo inaanan dhaawac aheyn. Laakiin waxaan joognay Wembley iyadoo aan kahor nimid in ka badan 80,000 oo taageerayaal ah, marka dabcan Sarri ima uusan fahmin. Markii sarkaalkii afaraad uu sare u qaaday mashiinka beddelka, sida cadba aniga waxay ahayd inaan baxo, waana ka xumahay inaanan bixin.”
“Waan qaldamay, waanan ka xumahay qof kasta oo ku lug lahaa: Maurizio Sarri, oo ay u muuqatay inaan meel fagaare ah ku kharibay; Taageerayaashii ay ahayd inay u dulqaataan wax walba – buuqii ka dhashay ciyaarta inta lagu guda jiray maalmo kaddib. ”